Stock stock: chii chinonzi BPA? | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe ukapedza imwe nguva mumusika wemasheya, iwe unofanirwa kuziva imwe yezviumbwa zvinokubatsira iwe zvakanyanya mukudyara, senge BPA. Zvakanaka, zvinoenderana neindekisi inoverenga chikamu cheiyo mambure purofiti yekambani yakagovaniswa pakati peumwe neumwe wezvikamu zvinoumba guta guru. Izvo zvakakosha kwazvo pasarudzo yemasecurity ayo iwe aunofunga anogona kuita kwazvo mushe mumakore anotevera. Hazvishamisi kuti iri paramende Chaizvoizvo inoshanda pamusika wemasheya uye mune chero mamiriro ezvinhu iri mita inoshandiswa mukuyera kuongorora kuti uone kukosha uko mitengo yemasheya inogona kusvika. Kune rimwe divi, iri paramende iyo inoteverwa zvakanyanya nevashambadzi vanoda kuita kwavo kuita pamusika wemasheya vane hukuru hunovimbisa hwekubudirira.
Chero rako zano rezvekudyara, hapana mubvunzo kuti mibairo pachikamu haifanirwe kunge ichishayikwa mukuongorora kwako kwehunyanzvi. Kune iyo poindi iyo inogona kuona kuti iwe unosarudza mamwe masheya kukosha kukuvadza vamwe. Nekuti, sezvauri kuona, EPS yakasiyana neimwe yezvichengetedzo zvakanyorwa pamisika yemari. Kunyangwe sosi yako yekuongorora inogara yakafanana kune vese. Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti iyi paramende yemusika wekutengesa ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa ratios uye aunogona kuwana mune chero bhuku rezvemari. Inogona kutokupa iwe yekupinda poindi yekuita mari yako pachako hupfumi.
Iyo inozivikanwa zvakare muChirungu seEPS (mibairo paShare) iri, kuitira kuti iwe uzive zvirinani, chikamu cheyese mambure purofiti yekambani iyo yakanyorwa pamisika yemari. Vazhinji vanoongorora zvemari vanotaura nezveBPA seimwe yavo mareferenzi masosi kukurudzira kuchengetedzwa kunozogadzira vatengi 'ekudyara portfolio. Kunyangwe pamberi pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Hazvishamise kuti ivo vanokwanisa kukupa inopfuura imwechete chiratidzo nezve iyo chaiyo mamiriro ezviito. Chinhu chisiri nyore nguva dzose uye chiri nyore, sezvazvinozivikanwa nevashambadzi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari.
1 BPA: iyi paramende yakavimbika here?
2 BPA inoverengwa sei?
3 Iyo inokanganisa sei tsika?
4 Kubatsira thermometer
5 Ukama hwakananga nePER
BPA: iyi paramende yakavimbika here?
Chinhu chekutanga icho iwe chauchazofanira kuziva kubva ikozvino zvichienda ndechekuti iyo mibairo pamasheya inofanira kutariswa mukuita yako ekudyara. Zvakanaka, mupfungwa iyi hapana chinhu chiri nani kupfuura a data rakakosha kwazvo kuita basa iri mumisika yemasheya. Pakutanga, nekuti hapana hupombwe mu data, asi zvinopesana, icho chiratidzo chakanangana nezve kukosha kwemusika wemasheya. Uye zvakare, haisi mhedzisiro yekufungidzira kwedata, kana yeanofarira ongororo yechikamu chikuru chevamiriri vezvemari. Izvo zvinoenderana nedatha rekuverenga remakambani iwo akanyorwa pamisika yemari.
Ehezve, chimwe chezvinhu zvinofanirwa kutariswa mumubhadharo wega wega ndicho chinoreva icho icho chinogona kupa kukosha maitiro mubvunzo. Kana zvisiri munguva refu, zvirokwazvo vepedyo, ndiko kuti munguva pfupi nepakati. Iko iko kuri ruzivo rwekukosha kwakakosha kuitira kuti vadiki nevepakati varimari vagone kutora danho maererano nemitengo yezvitoro yekuve mune yavo portfolio mumavhiki anotevera.
BPA inoverengwa sei?
Ino inguva yekuona iyo michini kuti uzive zvine chokwadi mubhadharo wega wega chikamu chekambani yakanyorwa pamisika yemari. Zvakanaka, uye kudzivirira kusanzwisisana, kuverenga kwayo hakunyatsoonekwe. Izvo semhedzisiro yekushanda kwe govana mambure purofiti yekambani pakati penhamba yezvikamu zvese mukati megore. Kubva nenzira iyi mhedzisiro ichawanikwa pasina kunyanya kunetsa. Nekudaro, zvinonyanya kudikanwa kuti ichi chakakosha chikamu chemusika wemusika chakanyatso kuperekedzwa nevamwe. Icho chikonzero ndechekuti pane mukana wekuti iyo yakaongororwa kambani ichaita account yayo. Kunyangwe kuita uku kuchingoenderana chete nediki-chivharo mumatura. Ehe kwete makuru ebhuruu machips emunyika stock stock.
Kune rimwe divi, kune zvakare kwakanyanya kuomarara BPA iri iyo yakasanganiswa. Mune ino kesi, inoreva kumakambani ane zviwanikwa zvinosanganisa kubatsirwa kwechiito. Iyi mamiriro anogona kukuvadza zano iro vatengesi vachatora mumazuva anotevera. Nekuti izvo zviyero zvinogona kuvhiringidzika mune zvakati wandei kana zvishoma nguva dzakaoma dzemakambani pachawo. Kusvika padanho rekuti zvakanyanya kuomarara kuita sarudzo nezve kuchengetedzeka uko kunofanirwa kuita yedu portfolio yekuchengetedzeka. Iko kune kwakanyanya kuomarara kuti uone kukosha kweicho chaicho kwemari pagovana. Nezvinokanganisa zvinotevera zveichi chiitiko.
Iyo inokanganisa sei tsika?
Ehezve, mibairo pachikamu kana, mune mamwe mazwi, EPS inogona kukanganisa mashandiro emakambani akanyorwa pamisika yemari. Mhedzisiro yaro yakawanda uye nekuda kweichi chikonzero chaicho iwe unofanirwa kutora ino paramita yemusika wemari mukutarisa kana uchiita mashandiro. Nekuti hazvikukwanire iwe kuti iyi data inokupa iwe inopfuura chiratidzo chimwe nezve kwaunofanirwa kuenda mari dzako kubva ikozvino. Kubva pane akajairika mamiriro, aya ndiwo mamwe mamiriro angave angamuka mumari yemari yemari.
Kana iwe ukaona kuti kambani ine yakaderera mihoro pane imwe share zvinogona kureva kuti stock haina kukosheswa. Asi pamwe nekwaniso yekuti mune isiri kure kure ramangwana mutengo wako unogona kuvandudza zvakanyanya, zviripakati nepakati nepakati. Kunyangwe zvisiri muzviitiko zvese izvi zvaunoda zvakanyanya zvinogadzirwa kuchikamu chevashambadzi vadiki nepakati.
Iko kubatsirwa kuri chikamu cheiyo reshiyo ndiyo mambure purofiti uye saka iwo mukana wakanaka wekuona kuti ndeipi chaiyo mamiriro ezvokuchengetedza kwaunoda kuisa mari yako. Nekuti pakupera kwezuva ivo vachakupa iwe ayo ari iwo masheya emusika zvirevo zvinonyatsopindura mumisika yemari mukati memwedzi iri kuuya kana kunyangwe makore. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti pane dzimwe nguva makambani akanyorwa ane inosarudzwa migove. Semhedzisiro yeiyi yakakosha accounting kukanganisa, usakanganwa kuti iyo EPS kuverenga kunosiyana zvishoma. Zvichava zvakakosha mukumisikidza iyo chaiyo mamiriro ematoko ayo anotengeswa muequity.
Kubva pane imwe nzvimbo yekutarira, yeuka kuti mibairo pamugove inoratidza zvakare kuti ndeapi matanho ayo hunhu huri nani vanogona kunge vaine mune isina kunyanyisa kureba ramangwana. Uye nekuda kwechikonzero chimwe chete, zvinopesana, izvo zvinogona kukudziridza kudonha kunozivikanwa uye izvo zvinogona kudzikisira mari yako yawakaisa mumwedzi mishoma inotevera. Muzviitiko zvese izvi, zvichave zvakakosha kuti iwe upinde mukushanduka kwayo uye nenzira iyi iwe unokwanisa kuita danho rakakwana.
Kune rimwe divi, chiyero ichi chinoyera purofiti inowanikwa nekambani yakanyorwa pamisika yemasheya. Iko kukwirira iyo mibairo pachikamu kana EPS, iyo yakakura ichave kushanda kwayo painonyorwa pamisika yenyika kana yepasi rose. Mupfungwa iyi, ndeyekukosha kukuru kuti iwe uzive kuti chidimbu cheruzivo icho inopihwa neanenge ese mapuratifomu emari uye mune iyo mamiriro ezvinhu iwe unogona kumhan'arira kubhangi iwe kwawakaisa chako chekuchengetedza kana inishuwarenzi yekudyara. Vachakupa pasina matambudziko akawandisa sezvo iri ruzivo irwo ruzhinji kune vese vadiki nepakati varimi.
Mune imwe tsinga, BPA zvakare inofunga nezvechikwereti uye kwete chete kukosha kwemusika. Izvi zvakanyanyisa kuoma kuverenga uye nekudaro zvinoda nhevedzano yemishumo inozove yakanyatsotsanangurwa nevamiriri vezvemari. Kusvikira pakuti zvichanyanya kunetsa kuturikira uye ungangodaro usina kudzidza kwakakodzera kuchinjisa kune ako ekudyara. Naizvozvo, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekutevera nhungamiro yakarairwa nemupi wezano rako wemusika wemasheya. Ndiani achazokwanisa kukoshesa izvi zvinongedzo munyika inogara iri yakaoma ye
Ukama hwakananga nePER
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa zvakare kuti iyo mibairo pachikamu ichi yakabatana zvakananga nekuverenga kweimwe yeanoratidza anonyanya kushandiswa nevashambadzi mumusika wemasheya uye ndiyo iyo PER. Iyi data yemusika wemari chiyero icho chinonongedza zvakananga mutengo wemugove kuEPS. Nechikonzero ichi, chinongedzo chavo chidiki pane chinowirirana uye pamwe chete zvinokutendera iwe kuti uve neongororo yakazara kwazvo yezvivimbiso zvakanyorwa pamisika yemasheya. Iko iko kuverenga kwekukanganisa kuchadzikira zvakanyanya uye kuchizobatsira iwe kunatsiridza yako investments kubva kune chero mhando zano uye zvisingaite kusarudzika chero chero mhando, sekune mamwe maparamende.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Stock stock: chii chinonzi BPA?